Bokin' i Jôba - Wikipedia
Bokin' i Jôba
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Joba)
Ny Bokin' i Jôba dia boky ao amin' ny Testamenta Taloha, ao amin' ny Baiboly, sy ao amin' ny Tanakh, boky masin' ny Jiosy, izay mahakasika ny fiainan' ny lehilahy iray atao hoe Jôba izay tsy niala tamin' ny finoana an' Andriamanitra na dia teo aza ny fahoriana lehibe nianjady aminy vokatry ny nataon' i Satana mpiampanga.
Harabin'ny vadiny i Joba, nataon'i Georges de La Tour (1625-1650)
Ny anarana hoe Bokin' i Jôba na Jôba ao amin' ny Baiboly malagasy dia avy amin' ny teny anglisy hoe Book of Job na Job (prôtestanta) na ny teny frantsay hoe Livre de Job (katôlika) izay samy avy amin' ny teny latina hoe Liber Iob. Atao hoe Ιώβ / Iôb io boky io amin' ny teny grika fa אִיּוֹב / Iyov (na Iyob) kosa izy amin'ny teny hebreo. Ny soratra mialoha renifeo miendrika zanapeo izay vakina hoe "i" na "y" (/i/ na /j/) ao amin' ny Baiboly hebreo sy grika ary latina dia nanjary tononina hoe "j" (/dz/) na "z" (/z/) sy soratana hoe "j" ao amin' ny Baiboly malagasy.
I Jôba sy ireo sakaizany, nataon' i Ilya Repin, taona 1869.
Ao amin' ity tantara mampalahelo ity dia niampanga an' i Jôba teo anatrehan' Andriamanitra i Satana sady nilaza fa i Joba dia tsy hanompo an' Andriamanitra raha niaina tao anaty fahoriana. Noporofoin' Andriamanitra amin' i Satana àry fa i Joba mpanompony dia tsy hiala aminy, na dia ao anaty fahoriana aza. Navelan' Andriamanitra ny devoly mba hampahory an' i Joba. Nanana sakaiza telolahy i Jôba izay niady hevitra taminy ny amin' ny antony niavian' izao fahoriana mahazo azy izao. Namaly azy ireo tsirairay i Jôba. Tamin' ny farany i Eliho izay tsy isan' ireo telo ireo no nahalala ny tena anton' izao fitsapana izao. Amin' ny farany ny boky dia mitatitra ny lahateny nataon' Andriamanitra ka tonga teo amin' ny alitaram-panaovam-panatitra dorana i Jôba sy ireo namany niaiky ny fahadisoan-keviny. Namerina amin' ny laoniny ny fiainan' i Jôba sy nanome azy ankohonana vaovao indray Andriamanitra.
Azo zaraina enina ny Bokin' i Jôba:
Teny fampidirana milazalaza ny toetr' i Jôba sy ny fizahan-toetra azy voalohany (Joba 1 - 2);
Teny irery fitarainana ataon' i Jôba noho ny fahoriany (Jôb 3);
Resaka nifanaovany tamin' ireo namany telo lahy (Jôb 4 - 27);
Teny irery in-telo miantoana nataon' i Jôba (Jôb 28 - 37);
Teny nataon' Andriamanitra sy valin-tenin' i Jôba (Jôb 38 - 42.8);
Teny farany nataon' i Jôba sy niverenan' ny fiadanany (Jôb 42.9-17).
I Jôba, nataon' i Léon Bonnat (1880)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Jôba&oldid=1041850"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 02:14
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 02:14 ity pejy ity.